စျေးဝယ်အိတ်၊ စူပါမားကတ်အိတ်၊ ကုန်စုံအိတ် - LGLPAK
LGLPAK™ အကာအကွယ်၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်အိမ်သုံးတစ်ခါသုံးပစ္စည်းများအားလုံးကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်း။ ကျနော်တို့အထူးပြု
* Polyethylene စျေးဝယ်အိတ်အမျိုးမျိုး။
မီးဖိုချောင်၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ထမင်းစသည့်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုသည့်ပလပ်စတစ်အိတ်အိတ်များ
* အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ကုန်တိုက်များ၊ ဆေးရုံများအတွက်စွန့်ပစ်အိတ်များ၏အရွယ်အစားအားလုံး။
* အမျိုးမျိုးသော Poly ထုပ်ပိုးလိုအပ်ချက်များကိုစိတ်ကြိုက်
* Baekeland (LGLPAK-bio-project) သည်အထက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများ၏ compostable & eco-friendly option များကိုကမ်းလှမ်းသည်
Multi Colour Printing စူပါမားကတ် Plast ...
LDPE Ziploc ရေခဲသေတ္တာအိတ်
ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အတွက် HDPE အစားအစာအိတ်
အခမဲ့နမူနာများရယူရန်သင်၏အီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံထားခဲ့ပါ၊ ၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်နိုင်လိမ့်မည်။
HDPE အနက်ရောင်တီရှပ်အိတ်များသည်စျေးကွက်အားလုံးတွင်လူကြိုက်အများဆုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ စတော့ရှယ်ယာများသည်ပုံနှိပ်ခြင်းမရှိဘဲအလတ်စားနှင့်အနက်ရောင်ရှိသည်။ ဖောက်သည်အားလုံးစုံစမ်းရေးလာရန်ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းသေချာအောင်နိုင်ပါတယ်။
အစင်း PP ယက်အိတ်
အစင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအိတ်များကိုစျေးအားလုံးတွင်လူကြိုက်များပြီးစျေးဝယ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်အခြားနေရာများတွင်အသုံးပြုသည်။ ခိုင်ခံ့သောအထည်နှင့်လှပသောအသွင်အပြင်ကြောင့်ပူပြင်းသည့်ရောင်းသူများဖြစ်စေသည်။
ရှင်းလင်းသောအစားအစာအိတ်များသည်ရေ၊ ဂျုံ၊ ဆီ၊ မုန်ညင်းစသည့်အစားအစာထုပ်ပိုးရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ အဆိပ်မရှိသော၊ အနံ့မရှိခြင်းနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းသည်ဤထုတ်ကုန်ကိုလူသိများသောကြယ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။
အိတ်များအတွက်အဝိုင်းပုံသေတ္တာအရွယ်အစားကို Circumference (C), Diameter (D) နှင့် Height (H) သုံး၍ ရှာနိုင်သည်။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များရှိသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသေးငယ်။ သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်ပျက်စီးလွယ်သောပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ရန်အမွှေးအကြိုင်ဖြင့်အသုံးပြုသည်။
လွယ်ကူစွာဖယ်ရှားရန်အတွက် Breakaway Design နှင့်အကျယ်အ ၀ န်းနှစ်မျိုးလုံးတွင်ရရှိနိုင်သောသက်သောင့်သက်သာရှိစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်
PVC လက်အိတ်နှင့် Nitrile လက်အိတ်များအတွက်အကောင်းဆုံးသောအစားထိုး! အဆိုပါပိုပြီးယှဉ်ပြိုင်နိမ့်စျေးနှုန်း! အမြောက်အများပမာဏထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ!
ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ် Filler မီတာ ...
ကယ်လ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိတ်ဓာတ်ဖြည့်တင်းသည့်အစုများအတွက်လူအများစုသည်နားလည်မှုလွဲနေကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ်ဓာတ်ဖြည့်တင်းသည့်မာစတာများအကြောင်းကိုကြားသောအခါ၎င်းတို့အဓိကပါဝင်သည့်အရာမှာကယ်လစီယမ် (c) ဖြစ်သည်ဟုထင်ကြလိမ့်မည်။
ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ် Filler မီတာ ... 21-05-21
ကယ်လ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိတ်ဓာတ်ဖြည့်တင်းသည့်အစုများအတွက်လူအများစုသည်နားလည်မှုလွဲနေကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ်ဓာတ်ဖြည့်တင်းသည့်မာစတာထုပ်ကိုကြားသောအခါ၎င်းတို့အဓိကပါဝင်သည့်အရာမှာကယ်လစီယမ် (c) ဖြစ်သည်ဟုထင်ကြလိမ့်မည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲ: Co ... 21-05-11
နေရာလွတ်ကြိုတင်မှာကြားထားသော်လည်းကွန်တိန်နာမရှိပါ။ ဤသည်မှာမကြာသေးမီကနိုင်ငံခြားကုန်သည်များစွာကြုံတွေ့ရသောပြaနာဖြစ်သည်။ ဘယ်လောက်လေးနက်လဲ •ဗလာဗုံးများမှာရန်အတွက်ယွမ်ထောင်ပေါင်းများစွာသုံးစွဲခဲ့သည်။
Polyethylene: အနာဂတ်ကစိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်၊ ​​ဘယ်သူလဲ ... 21-04-26
ပြည်တွင်း PE စျေးကွက်သည်Aprilပြီလတွင်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းမရှိသော်လည်းဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျဆင်းမှုမှာသိသာထင်ရှားဆဲဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အားနည်းနေပြီးလှိုင်းလေထန်တဲ့ခရီးဟာပိုပြီးပင်ပန်းသည်။ ပူးတွဲ ...